मैले मेरो वेब डिजाइन सुधार गर्न कुन व्यावसायिक सेवाहरू चाहिन्छ?
वेबसाइट डिजाइन मास्टर गर्न एकदम जटिल र जटिल वेब विकास कौशल हो. तपाईंको साइट डिजाईन सिर्जना गरी, तपाइँलाई सम्भावित ग्राहकहरु को आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्नु पर्छ र खोज ईन्जिनियरिङ्हरु लाई तपाइँको साइट लाई प्यार गर्नु पर्छ. खोजबाट तपाईको साइटमा आउने प्रयोगकर्ताहरू आकर्षित गर्न तपाईंसँग 30 सेकेन्ड भन्दा कम छ. उसले निर्धारण गर्नुपर्दछ कि तपाइँको साइट एकचोटि बारेमा के हो. अन्यथा, उसले आफ्नो प्रतियोगी वेबसाइटहरु पछि उनको खोजी अगाडी बढाएगा. यसैले तपाईंलाई आफ्नो होमपेज, मेनु पट्टी र पृष्ठभूमि प्रयोग गर्नु भएकोमा तपाइँलाई ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ - aspire e-cigarettes. तपाईंले निश्चित गर्न आवश्यक छ कि तपाइँका वेबसाइट आगन्तुकले तपाईको साइटलाई उनीहरूलाई आवश्यक के फेला पार्न को लागी सजिलै संग नेभिगेट गर्न सक्दछ.
यदि तपाईंको साइटको उच्च उछाल दर छ र तपाईंको दर्शकहरूले ग्राहकहरूमा रूपान्तरण गर्दैनन्, तपाईसँग तपाइँको साइट डिजाइनमा केहि कमजोर बिन्दुहरू छन् जुन सुधार हुन आवश्यक छ।. तपाईंको वेबसाइट डिजाइन को बढाने को लागी तपाईं धेरै लायक विभिन्न तत्वहरू छन्. यो मार्गदर्शक डिजाइन गरिएको छ कि तपाइँले तपाईंको साइट डिजाइन कसरी सुधार गर्नका लागि केहि तरिकाहरू देखाउने पेशेवर डिजाइन डिजाइन सेवाहरू लागू गर्दछ.
व्यावसायिक वेब डिजाइन सेवाहरु
Google 2015 एल्गोरिदम अपडेट को अनुसार, सबै वेबसाइटहरु लाई उत्तरदायी डिजाइन को लागी चाहिए Google मा उच्च श्रेणी. सांख्यिकीय डेटा अनुसार, मोबाइल उपकरणहरूबाट धेरै खोजीहरू कम्प्युटरबाट खोजीहरूको संख्या नाघ्यो. आजकल, सबै सर्भरको लगभग 31% जुन पहिलो SER पृष्ठमा राखिएका वेबसाइटहरूमा आउँदैछ मोबाइल उपकरणहरूबाट आयो. यही कारणले तपाइँले तपाइँको साइटलाई मोबाइल खोजबाट थप नयाँ आगन्तुकहरू आकर्षित गर्न जवाफ दिन आवश्यक छ. यदि तपाईंको साइट मोबाइलको लागी तयार छैन भने, तपाइँका वेब पृष्ठहरूमा आगन्तुकहरू राख्नको लागी एक कठिन समय हुन जानेछ र Google TOP.
ओभरलोड गरिएको भन्दा राम्रो छ
डिजिटल बजारमा सफल हुन, तपाईलाई उत्तम अनुभव ल्याउन सरल र सहज डिजाइन सिर्जना गर्नुपर्छ। तपाईंको वेबसाइट आगन्तुक र आफ्नो रैंकिंग बढावा दिन. आजकल, वेब डिज़ाइनले कम्युनिस्ट र सादगी गहिरो बनाउँछ किनकि यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूलाई छिटो र सजिलै संग जटिल बनाउन सक्दछ जुन जटिल र ठुलो मेनुसँग सम्झौता गर्न आवश्यक छ।. जटिल डिजाइनहरू इतिहासमा लुकेका छन्. हाल, सादगी जटिलता भन्दा बढी मूल्यवान छ. सफा र फ्लैट डिजाइनहरू प्रवृतिमा छन्, र यो कुन व्यवसायले लगातार अनुकूल गर्न प्रयास गर्दै छन्. यसबाहेक, अति भारी मासु डिजाइनहरू र फैंसी ग्राफिक्सले तपाइँको वेब पृष्ठ लोडको प्रक्रियालाई ढिलो पार्न, तपाईको SERP मा साइटको स्थिति कम गर्न सक्छ.
तपाईंको साइटमा आवश्यक पृष्ठमा प्राप्त गर्नका लागि तपाईका सम्भावित ग्राहकहरू खर्च गर्न आवश्यक समय दुई सेकेन्ड छ।. यदि यो तपाईंको साइटको बारेमा छैन भने, तपाइँलाई आफ्नो साइट नेभिगेशन सुधार गर्न आवश्यक छ. यो गर्ने सबै भन्दा राम्रो तरिका तपाईंको मेनु र नेभिगेसन को सरल बनाउन को लागी छ. यदि तपाइँ आफ्ना ग्राहकहरूलाई धेरै विकल्पहरू दिनुहुन्छ भने, उनीहरूले निराश महसुस गर्नेछन् र धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरू पाउनेछन्. सबै कुरा स्पष्ट गर्न, तपाईले प्रत्येक प्रयोगकर्ताको खण्डको लागि छोटो विवरण सिर्जना गर्नका लागि तपाईंको प्रयोगकर्ताहरूलाई पछि लाग्ने कुरा के स्पष्ट बुझ्न दिन सक्नुहुन्छ. कम महत्त्वपूर्ण वेब पृष्ठहरूको लागि, तपाईले उप-मेनुमा तिनीहरूलाई लिङ्क गर्न सक्नुहुनेछ.
यो सम्पर्कमा सम्पर्क गर्न सरल बनाउनुहोस्
यो नियम तपाईलाई अनावश्यक लाग्न सक्छ जस्तै यो यो जान्छ बिना भन्न. यद्यपि, अधिकांश अवस्थामा, त्यहाँ वेबसाइट वा समर्थन टोलीको मालिकसँग सम्पर्कमा केही कठिनाइहरू छन्. यसकारण तपाईंलाई निश्चित हुन आवश्यक छ कि तपाईंको साइटको जानकारी प्रत्येक साइटमा एक साइड मेनुको रूपमा वा पप-अपको रूपमा उपलब्ध छ।. साथै, तपाइँ स्थायी रूपमा यसलाई वेब फुटरमा राख्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाईं सामग्री जानकारी दृश्यात्मक छैन भने, तपाइँले प्राय: तपाइँको ग्राहकहरु र आफ्नो उत्पादन खुदरा को लागी अवसरहरू गुमाउनु हुन्छ र साथै तपाईंको लक्षित दर्शकको नजिक रहन सक्नुहुनेछ।.